IMunich kungenye indlela yalabo abakhetha iJalimane ukuthi ifunde isiJalimane ngemuva kweBerlin. Ukufunda ngezikole zolimi eMunich, sizilungiselele ngokuya ngemfundo ejwayelekile yaseJalimane, ezomnotho kanye nezigaba abafundi abavame ukuzikhetha Isifundo Esihamba phambili saseJalimane eMunich Sincoma ukuthi ubuyekeze ngokucophelela i-athikili yethu enesihloko. Ngezansi ungathola izikole ezintathu zezilimi ezingcono kakhulu futhi ezingabizi kakhulu eMunich.
Lesi sikole solimi eMunich sinamagatsha angama-3 asedolobheni elifanayo. I-Intensive German 20 yavulwa ngo-1978 futhi iyaqhubeka nokufunda ngamakilasi angama-48 namuhla. Inikeza ngemfundo yaseJalimane kuwo wonke amazinga amaqembu aneminyaka engu-16 nangaphezulu. Usayizi wekilasi unabafundi abayi-8 ngekilasi ngalinye, ubuningi babafundi abangu-12. Izinsuku zezifundo zinqunywa njengoMsombuluko nangoLwesihlanu phakathi nesonto futhi kubanjwa izifundo ezingama-45, ngasinye sithatha imizuzu engama-20 ngesonto. Ngenkathi isikhathi semfundo sihluka phakathi kwamasonto e-1-12 esewonke, amaqembu angavulelwa abafundi abasha abazoqala njalo ngoMsombuluko esikoleni solimi.
I-Standard German Course Munich - yenza i-deutsch-institut eMunich
Isikole solimi, ebesisebenza eMunich kusukela ngo-1977, sinamakilasi ayi-11 esewonke. Usayizi wekilasi uyehluka phakathi kwesilinganiso sabafundi abayi-12-15 namaqembu abafundi aneminyaka engu-17 nangaphezulu. Izifundo zenziwa njalo ngoMsombuluko kucatshangelwa abaqalayo. Kuyabonakala ukuthi ingqikithi yezifundo ezingama-45, ezithatha imizuzu engama-20, zibanjwa ngesonto, kanti isikhathi sokuqeqeshwa sisonke siyahluka phakathi kwamasonto e-1-48. Kuyinzuzo ukuthi futhi ineseshini yasekuseni neyesikhathi santambama. Njengazo zonke ezinye izifundo, abafundi abaphothula imfundo banikezwa isitifiketi sokuphothula ekupheleni kwesifundo.
Isifundo Esibanzi EMunich - Sprachcaffe Munich
Esifundweni, esinamakilasi ayi-7 esewonke, usayizi wekilasi ungaphezulu kwe-12 kanti ibanga leminyaka ngu-16 nangaphezulu. Ufundisa isiJalimane esijwayelekile nawo wonke amazinga. Isikhathi sokuqeqeshwa singamaviki angama-52 aphezulu. Kukhona ingqikithi yezifundo ezingama-30 ngeviki futhi isikhathi ngasinye sesifundo yimizuzu engama-45.